I-Lemon Cake Recipe kusuka ku-Scratch + isifundo sevidiyo - Ikhekhe
Lemon Ikhekhe Recipe
Ikhekhe Le-Lemon Buttermilk Nge-Lemon Curd E-Homemade Ne-Zesty Lemon Buttercream
Bengilokhu ngiphelelisa lokhu iresiphi yekhekhe lemon iminyaka ngize ngiyithole kahle. Imfihlo yalokhu kuthungwa kwe-velvet kanye nokunambitheka kukalamula okumsulwa kuningi le-zest lemon, i-buttermilk nokusebenzisa ulamula kalamula ekugcwaliseni nasekubhaliseni i-buttercream elula ! Le iresiphi yekhekhe lemon iyiphupho lomthandi kalamula ngempela!
Ngicabanga ngobuqotho ngangizonda ikhekhe kalamula isikhathi eside kakhulu. Njalo lapho nganginanoma yini enamakha kalamula ayizange ihlale kahle. Kuvela ukuthi ngiyakuzonda ukunambitheka kukalamula okungamanga. Kungikhumbuza ngamaconsi okukhwehlela. Hhayi ngqo engikufunayo kwikhekhe lemon.
Ngemuva kokufunda ukubhaka kusuka ekuqaleni esikoleni samakhekhe, nginqume ukuguqula ikhekhe lami le-vanilla libe ikhekhe kalamula. I-Omg umehluko omkhulu! Ikhekhe lelamula manje selingelinye lama-flavour engiwathanda kakhulu ngekhekhe. Uma ulithanda ilamula njengoba ngenza, hlola eyami lemon okusajingijolo ikhekhe futhi yami ikhekhe le-lemon blueberry !
Yini eyenza lekhekhe likalamula libe manzi kangaka?
Le iresiphi yekhekhe lemon, kufana nezinye izindlela zokupheka zekhekhe ezifana ikhekhe le-vanilla futhi i-velvet buttermilk emhlophe Ikhekhe linezithako ezithile ezisemqoka zokuswakama okuphezulu kanye nokuthungwa kwe-velvet yokuncibilika emlonyeni wakho.
Ubisi lwebhotela - wephula i-gluten kufulawa wekhekhe bese ephendula ngezithako ezinomsoco ukudala ikhekhe elikhanyayo nelifudumele elithambe kakhulu!
Ufulawa wekhekhe - ufulawa wekhekhe une-gluten encane kuwo kunofulawa we-AP, okuholele ekuthambekeni kakhulu kwekhekhe. ** qaphela, awukwazi ukwenza lelo qhinga lapho ufaka khona ufulawa we-AP ngesitashi sommbila noma uzophela nesinkwa sommbila.
Reverse indlela yokuxuba - Indlela yokuxuba eguqukayo inqubo yokumboza izithako zakho ezomile nebhotela ngaphambi kokufaka iziphuzo. Le bhotela 'ifinyeza' imicu ye-gluten futhi inikeze ikhekhe i-velvet crumb.
Amafutha - Kubaluleke kakhulu kumakhekhe ebhotela ukugcina amakhekhe akho angomi. Lapho ikhekhe libanda, ibhotela elikwikhekhe liba nzima futhi lingenza ikhekhe linambitheke. Amaqebelengwane kufanele asetshenziswe njalo ekamelweni lokushisa ukuze uthole imiphumela emihle.
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokufaka ukunambitheka okuningi kukalamula kuresiphi yekhekhe lemon?
Lekhekhe likalamula lithola ama-citrus zing kusuka ku-zest eningi, ijusi kalamula kanye nokukhishwa okuncane ku-batter cake. Ungakwazi ukupompa i-zest uma ufuna ukunambitheka okungaphezulu kwelamula noma engeza ku-1/4 ulamula kalamula kubhaki lekhekhe labo bathandi bakalamula bokugcina laphaya (njengami). Sengike ngasebenzisa uwoyela kalamula ku-buttercream yami kodwa kuyabiza impela.
Ikhekhe lelamula lihamba kahle kakhulu ngokunambitheka okuningi kepha ikakhulukazi ezinye izithelo! Sithanda ukugcwaliswa kukalamula curd nge yethu iresiphi yekhekhe le-sitrobheli noma ugcwalise iresiphi yekhekhe likalamula nge-yummy ethile i-marion berry buttercream !
Yimaphi amapani osayizi ongawasebenzisa kule iresiphi yekhekhe lemon?
Lekhekhe likalamula lingasetshenziswa kunoma iyiphi ipani losayizi. Iresiphi eyodwa yekhekhe likalamula izokwenza izingqimba ezintathu zekhekhe eziyi-6 ″ x2 or noma izingqimba ezimbili eziyi-8 ″ x2 ″. Ngijwayele ukuba yipani eligcwele ikhekhe eligcwalisa ngokweqile ngoba ngithanda ukuthi izingqimba zami zekhekhe zibe ngu-2 ″ ubude. Gcwalisa ama-cake pan 3/4 ngendlela egcwele (noma cishe u-1/2 ″ wesikhala phakathi kwaphezulu kwe-batter yekhekhe nangaphezulu kwepani.
Okwezendlalelo zekhekhe eziyi-12 ″ noma ezinkudlwana, ngisebenzisa i- Ukushisa core . Umnyombo wokushisa usiza maphakathi nekhekhe ukubhaka ngokushesha ukuze imiphetho yakho ingomi. Ungasebenzisa futhi isipikili sembali uma ungenawo umnyombo wokushisa. Ungaphinda futhi uyiphindaphinde kabili kathathu le recipe ngaphandle kokwenza ushintsho.
Ingabe le recipe yekhekhe likalamula ilungele amakhekhe?
Ungaguqula izindlela zokupheka eziningi zamakhekhe zibe amakhekhe kodwa ushiye uwoyela ngoba kwenza amakhekhe abe namafutha kakhulu. Akuwona wonke ikhekhe elihumusha kahle kumakhekhe. Lezi yizinyathelo engizisebenzisayo ukuhlola iresiphi yekhekhe ngaphandle kwamakhekhe.
izindlela zokupheka zekhekhe zamahhala ezingenashukela
Hlangisa i-ovini yakho iye ku-400ºF.
Gcwalisa i-liner yakho 2/3 yendlela egcwele (cishe ama-3 wezipuni zekhekhe le-batter). Ukugcwalisa ngokweqile ama-liners akho kungadala ukuthi kuchichime futhi kwehle.
Bhaka amakhekhe imizuzu emihlanu bese wehlisa izinga lokushisa libe ngu-350 toF. Lokhu kusiza ukusetha i-dome.
Qhubeka ubhake amakhekhe imizuzu eyishumi nambili eyengeziwe bese uhlola izikhungo. Uma zisathambile futhi zingasethiwe, qhubeka ubhake. Amakhekhe amaningi enziwa phakathi kwemizuzu engu-18-25.
Lapho amakhekhe akho eseqedile ukubhaka, susa ipani kuhhavini bese uwavumela ukuba aphole kuraki wocingo imizuzu eyi-10 ngaphambi kokuwakhipha epanini lekhekhe.
Hlola imiphumela yakho. Uma ikhekhe lingavukanga ngokwanele, faka i-batter eningi ngesikhathi esilandelayo. Uma igeleza ngokweqile, faka okuncane. Qaphela ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani amakhekhe ukubhaka.
Sebenzisa ama-liners-proof liners ukusiza ukulwa nama-liners abe sobala ngemuva kokubhaka.
Ingabe kukhona okunye okungathatha indawo yokukhishwa kukalamula?
Uma ungenakho ukukhishwa kukalamula, awukwazi ukuvele ubeke ijusi likalamula esikhundleni salo. Ijusi likalamula alinayo ithoni yokunambitheka kukalamula ngaphandle kokuthi usebenzise okuningi. Ukukhishwa kukalamula ukuxubana okuphezulu kukalamula okuxutshwe notshwala okuzophucula kushiye ukunambitheka kukalamula. Uma ufuna ukufaka esikhundleni sokukhishwa kukalamula, ukungeza i-1 tsp ye-zest eyengeziwe yelamula kungaba yisinqumo esingcono.
Ukugcwaliswa kwe-curd kalamula
I-Lemon curd iyindlela enhle yokwengeza ukunambitheka kukalamula kwikhekhe lakho kalamula. Impela ungathenga i-lemon curd kepha kungani uma ukwenza kube lula futhi kunambitheka KAKHULU KAKHULU.
ungagcina kanjani ukhilimu ophehliwe uzinzile
Uma umusha ekwenzeni i-curd, inqubo ilula kakhulu. Ngokuyinhloko, uhlanganisa ujusi (njengelamula, i-orenji, i-lime njll) noshukela bese uwuphehla phezu kwebhayela elinezikhupha zamaqanda lize likhule. Le kuyindlela enhle yokusebenzisa noma iziphi izikhupha zamaqanda ezisele ozibeke nxazonke uma usanda kwenza ikhekhe elimhlophe noma i-meringue.
Icebo lokuqinisekisa ukuthi i-curd ifinyelela ku-170ºF ukuze ibe yinhle futhi ibe mkhulu. Uma unezinkinga zokuthola i-curd yakho ibe wugqinsi ngokwanele, hlanganisa isipuni esingu-1 se-cornstarch ne-1oz yamanzi abandayo bese ushaya uze ubushelelezi. Faka i-cornstarch slurry ku-curd bese uqhubeka nokushisa kuze kukhule.
Thela i-curd yakho esitsheni bese umboza ngopulasitiki (qiniseka ukuthi ukugoqwa kwepulasitiki kuthinta ubuso be-curd) bese uyivumela ipholile efrijini ubusuku bonke ngaphambi kokuyisebenzisa.
Ungayenza kanjani i-buttercream kalamula elula
Nginqume ukwenza inguqulo kalamula ye-buttercream yami elula yale recipe yekhekhe lemon. A ulamula kakhilimu ushizi futhi kungaba mnandi impela. Imfihlo yokwenza le buttercream kalamula ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa isinamathiseli se-whisk ukuqala ngaso. Akunasidingo sokuletha izithako ekamelweni lokushisa. Mane uhlanganise abamhlophe bamaqanda abancishisiwe noshukela oluyimpuphu nesiswebhu phezulu imizuzu engu-2-3. Nciphisa isivinini uye phansi bese ufaka iziqu zakho ezithambile zebhotela, usawoti, kanye nokukhishwa.
Khulisa isivinini sesixubi sakho siye phezulu bese usiyeka sishaye kuze kube yilapho sikhanya kakhulu futhi sinokhilimu. Lokhu kungathatha imizuzu eyi-10-15 kuye ngomxube wakho. Nikeza i-buttercream yakho ukunambitha, uma kunambitheka kakhulu, qhubeka ubhaxabule.
Uma i-buttercream yakho isinhle futhi ishibhile ungangeza ku-curd yakho yelamula bese ucisha i-whisk yakho yokunamathisela kwephedi. Hlanganisa phansi ngeminye imizuzu eyi-10 ukuze ususe amagwebu futhi wenze i-buttercream yakho ibe muhle futhi ibushelelezi.
Ungenza kanjani ikhekhe lesendlalelo kalamula nge-lemon curd drip
Okokuqala ukwenza ikhekhe? Buka indlela yami yokwenza yenza ikhekhe lakho lokuqala okokufundisa ukufunda konke mayelana nokufaka isitaki nokugcwalisa ikhekhe ngendlela yobungcweti.
Ngithanda uku bhaka izendlalelo zami zekhekhe likalamula usuku olungaphambi kokuthi ngibadinge ukuze baphumule. Zisongele ngepulasitiki bese uzishiya kuphathi wokubala ubusuku bonke kepha ungaziphozisa futhi ukuze uziphathe kalula.
Nami yenza ulamula wami kalamula ngayizolo Ngiyayidinga ukuyinika isikhathi sokuphola. Qiniseka ukuthi umboza ngaphezulu kukalamula wakho kalamula ngokugoqwa kwepulasitiki ngakho-ke kuthinta indawo ukuvikela isikhumba esingajwayelekile ukuthi sakheke.
Ungenza i-buttercream ngayizolo noma ngosuku luka. Ngenza usuku lwalo ukuze luhle futhi lubushelelezi. Faka inkomishi eyodwa ye-curd yakho kalamula ku-buttercream yakho nge-1 tsp yokukhishwa kukalamula nokunye okuthambile kukalamula uma ufisa. Hlanganisa kuze kube bushelelezi.
Gweba emaphethelweni ansundu ezungeze iziqongo, izansi, nezinhlangothi zekhekhe ngocezu lwekhekhe oluhle kakhulu. Akudingeki kepha uma ufuna ukuphelela njengami, awufuni ukuphuthelwa lesi sinyathelo.
Beka ikhekhe lakho kwikhadibhodi nxazonke bese usebenza ku-turntable ukuze ukhululeke. Dala idamu le-buttercream nxazonke ngaphandle kwesendlalelo sakho sokuqala sekhekhe. Gcwalisa isikhungo cishe nge-1/4 ″ kalamula futhi bushelelezi. Phinda ngesendlalelo sesibili sekhekhe.
Imvuthu gqoka ikhekhe lakho ngongqimba oluncane lwe-buttercream bese ubanda ubusuku bonke noma efrijini cishe ihora elilodwa.
Qedela ikhekhe lakho engutsheni yokugcina ye-buttercream futhi ukuhlobisa ngezinye curd kalamula ngaphezulu ulamula odonswayo nosanda kusikwa.
Iresiphi yekhekhe elimnandi futhi elimnandi nge-lemon buttercream ne-lemon curd! Ngomthandi weqiniso kalamula! Isikhathi sokulungiselela:ishumi nanhlanu amaminithi Isikhathi Sokupheka:35 amaminithi Isikhathi esiphelele:Isine amaminithi Amakholori:520kcal
Izithako Zekhekhe Lelamula
▢13 ama-ounces (368 g) Ufulawa wekhekhe
▢13 ama-ounces (369 g) ushukela ogqamile
▢1/2 isipuni (1/2 isipuni) usawoti
▢ezimbili isipuni (ezimbili isipuni) iphawuda wokubhaka
▢1/2 isipuni (1/2 isipuni) okukhukhumalisa amakhekhe
▢8 ama-ounces (227 g) ibhotela elingenawo usawoti Ithambile kodwa ayincibiliki
▢10 ama-ounces (284 g) ubisi lwebhotela Noma ubisi olujwayelekile nge-1 Tbsp uviniga omhlophe ungeziwe
▢3 ama-ounces (85 g) uwoyela wemifino Noma uwoyela we-canola
▢3 Kukhulu (3 Kukhulu) Amaqanda Iqanda elikhulu eli-1 linesisindo esingaba ngu-1.67oz
▢1 Isipuni (1 Isipuni) I-Lemon Zest Cishe ilamula elilodwa
▢ezimbili amathisipuni (ezimbili amathisipuni) I-Lemon Extract
▢ezimbili Izipuni (ezimbili Izipuni) Ijusi Lemon Okusha noma okubhodlela kulungile
▢8 ama-ounces (227 g) Ijusi Lemon Okusha noma okubhodlela kulungile
▢6 ama-ounces (170 g) Ushukela ogqamile
▢5 (5) Amaqanda amaqanda
▢1/4 isipuni (1/4 isipuni) usawoti
▢4 ama-ounces (113 g) Ibhotela elingavunyelwe
▢1 Isipuni ummbila
▢3 Izipuni amanzi abandayo
▢8 ama-ounces (227 g) Amaqanda Abamhlophe Abathandwayo Ingatholakala esigabeni samaqanda ebhokisini, imvamisa eshalofini eliphezulu
▢32 ama-ounces (907 g) Ibhotela elingavunyelwe Ithambile kodwa ayincibiliki
▢32 ama-ounces (907 g) Ushukela oluyimpuphu
▢ezimbili amathisipuni (ezimbili amathisipuni) ulamula
▢4 ama-ounces (113 g) I-Lemon Curd
Imiyalo Yekhekhe Lelimu
Izinto Ezibalulekile Okumele Uziqaphele Ngaphambi Kokuba Uqale 1. Letha zonke izithako zakho ku lokushisa ekamelweni noma kufudumele okuncane (amaqanda, ubisi lwebhotela, ibhotela, njll) ukuqinisekisa ukuthi i-batter yakho ayiphuli noma ivimbe. 2. Sebenzisa isikali ukukala izithako zakho (kufaka phakathi uketshezi) ngaphandle kwalapho uyalelwe ngenye indlela (amathisipuni, amathisipuni, ingcosana nokunye). Izilinganiso zemethrikhi ziyatholakala ekhadini leresiphi. Izithako ezikaliwe zinembe kakhulu kunokusebenzisa izinkomishi futhi zisiza ukuqinisekisa impumelelo yeresiphi yakho. 3. Prakthiza iMise en Place (konke okusendaweni yayo). Linganisa izithako zakho ngaphambi kwesikhathi futhi uzilungiselele ngaphambi kokuba uqale ukuxuba ukunciphisa amathuba okushiya okuthile ngephutha. 4.Shisa amakhekhe akho ngaphambi kokuqhwaza nokugcwalisa. Ungamboza ikhekhe elifriziwe nelibandisiwe ku-fondant uma ufisa. Lekhekhe nalo lihle kakhulu ekubekeni isitaki. Ngihlale ngigcina amakhekhe ami efriziwe esiqandisini ngaphambi kokulethwa ukuthuthwa okulula.
Hlangisa i-ovini yakho iye ku-335º F / 168º C Lungisa amapani akho wekhekhe nge-goop yekhekhe noma enye ukukhishwa kwepani. Ngamapani ayisikwele noma amakhekhe angaphezu kwe-12 ', ngisebenzisa nephepha lesikhumba.
Hlanganisa i-4oz yobisi lwebhotela namafutha bese ubeka eceleni.
Ku-6oz osele wobisi lwebhotela, engeza amaqanda akho, i-zest lemon, ukukhishwa kukalamula, nejusi kalamula. Shaya kancane ukuqhekeza amaqanda bese ubeka eceleni.
Faka ufulawa wekhekhe, ushukela, usawoti, i-powder yokubhaka, ne-baking soda esitsheni se-stand mixer sakho nesinamathiseli sephedi.
Guqula isixubeki siye ngejubane eliphansi kakhulu. Faka ibhotela lakho elithambile ngemixube emincane uxube kuze kube yilapho ingxube yefulawa ifana nesihlabathi esikhulu.
Faka ingxube yakho kawoyela / yobisi ngasikhathi sinye kuzithako ezomile bese uxubana naphakathi (isivinini esingu-4 ku-KitchenAid) imizuzu emibili egcwele ukuthuthukisa ukwakheka kwekhekhe.
Sula isitsha. Lesi yisinyathelo esibalulekile. Uma weqa, uzoba nezigaxa ezinzima zikafulawa nezithako ezingaxutshiwe ku-batter yakho. Uma ukwenze kamuva, ngeke bahlangane ngokugcwele.
Faka kancane ingxube yobisi / iqanda ezingxenyeni ezi-3, udedele i-batter mix amasekhondi ayi-10 phakathi kokungeziwe. Yima ukusula isitsha futhi phakathi nendawo. I-batter yakho kufanele ibe mkhulu futhi ingahlukaniswa. Uma ihlukanisiwe, ezinye izithako zakho bezingabanda kakhulu noma ungeze iziphuzo zakho ngokushesha okukhulu.
Gcwalisa ama-cake pan 3/4 agcwele i-cake batter. Nikeza ipani ngokuthepha okuncane ohlangothini ngalunye ukuze ulinganise i-batter futhi ususe noma yimaphi amagwebu omoya. Ungakala futhi amapani akho wekhekhe ukuqinisekisa ukuthi ipani ngalinye linenani elifanayo le-batter cake.
Amakhekhe amancane azobhaka ngokushesha kunamaqebelengwane amakhulu. Qala ngemizuzu engama-30 ngamakhekhe ayi-6 noma engu-8 bese ufaka isikhathi njengoba kudingeka. Ihhavini ngalinye lihlukile ngakho-ke lungisa isikhathi sakho sokubhaka njengoba kudingeka. Amakhekhe abhakwa lapho umuthi wokuxubha uphuma kahle phakathi nendawo. Susa amakhekhe kuhhavini bese ubanikeza umpompi etafuleni ukuze ukhiphe umoya futhi uvimbele ukuncipha okuningi.
Ngemuva kokuthi amakhekhe esepholile imizuzu eyi-10 noma amapani epholile ngokwanele ukuthi angathintwa, uwafake amakhekhe endaweni yokupholisa bese uwavumela aphole kuze kufudumele. Songa amakhekhe akho ngokugoqwa kwepulasitiki bese ubanda esiqandisini ngaphambi kokubandayo ukuze kube lula ukusingatha. Ungazifaka nasesiqandisini uma ujahe ukuthi zipholile.
Uma amakhekhe esepholile manje usungawanciphisa, ugcwalise futhi uhlobise ikhekhe lakho njengoba ufisa.
Imiyalo ye-Lemon Curd
Letha u-½ ”ku-1” wamanzi ngamathumba epanini elikhulu
Esitsheni esikhulu sengilazi noma esitsheni sensimbi esingasebenzi kahle hlanganisa izikhupha zamaqanda, ijusi kalamula, i-zest, ushukela nosawoti. Beka isitsha epanini.
Letha amanzi ukuze ubile bese ushaya ingxube njalo ize ikhule futhi izinga lokushisa lifunde cishe ngo-170ºF.
Hlanganisa i-cornstarch namanzi ukuze wenze i-slurry, engeza engxenyeni yokubhuza, uvuselele njalo futhi upheke imizuzu engu-1-2 ngaphezulu kuze kube yilapho i-cornstarch icacile.
Susa i-curd emlilweni. Ngokushesha engeza ibhotela lakho libe yizicucu ezincane ku-curd. Shaya kuze kube yilapho ubushelelezi. Hlunga ingxube ukususa noma yiziphi izingcezu ezinkulu ze-zest noma imbewu.
Mboza i-curd ngesimbozo sepulasitiki ukuze sithinte ubuso be-curd ngaphandle kwamabhamuza omoya phakathi, lokhu kuzovimbela isikhumba ukuthi sakheke ngaphezulu kwe-curd. Ifriji kuze kuphole ngaphambi kokusebenzisa.
Imiyalo ye-Lemon Buttercream
Beka abamhlophe bamaqanda noshukela oluyimpuphu esitsheni sokuxuba nesinamathiselo se-whisk. Hlanganisa imizuzu engu-2-3 ephezulu ukuhlanganisa.
Faka ibhotela ezinhlakeni ezincane bese ukhipha ulamula nosawoti. Shaya phezulu kuze kube lula nokukhanyayo futhi kumhlophe. Faka i-curd yakho kalamula bese uxuba ukuhlanganisa. Ongakukhetha: shintshela kokunamathiselwe kwe-paddle bese uxuba phansi imizuzu eyi-15-20 kuze kuphele wonke amabhamuza omoya.
Izinto Ezibalulekile Okumele Uziqaphele Ngaphambi Kokuba Uqale
Letha zonke izithako zakho ku lokushisa ekamelweni noma kufudumele okuncane (amaqanda, ubisi lwebhotela, ibhotela, njll) ukuqinisekisa ukuthi i-batter yakho ayiphuli noma ivimbe.
Sebenzisa isikali ukukala izithako zakho (kufaka phakathi uketshezi) ngaphandle kwalapho uyalelwe ngenye indlela (amathisipuni, amathisipuni, ingcosana nokunye). Izilinganiso zemethrikhi ziyatholakala ekhadini leresiphi. Izithako ezikaliwe zinembe kakhulu kunokusebenzisa izinkomishi futhi zisiza ukuqinisekisa impumelelo yeresiphi yakho.
Prakthiza iMise en Indawo (konke okukuyo kusendaweni). Linganisa izithako zakho ngaphambi kwesikhathi futhi uzilungiselele ngaphambi kokuba uqale ukuxuba ukunciphisa amathuba okushiya okuthile ngephutha.
Pholisa amakhekhe akho ngaphambi kokuqhwaza nokugcwalisa. Ungamboza ikhekhe elifriziwe nelibandisiwe ku-fondant uma ufisa. Lekhekhe nalo lihle kakhulu ekubekeni isitaki. Ngihlale ngigcina amakhekhe ami efriziwe esiqandisini ngaphambi kokulethwa ukuthuthwa okulula.
Amakholori:520kcal(26%)|Amakhabhohayidrethi:57g(19%)|Amaprotheni:4g(8%)|Amafutha:32g(49%)|Amafutha agcwalisiwe:amashumi amabili nanyeg(105%)|Cholesterol:95mg(32%)|I-Sodium:189mg(8%)|Potassium:97mg(3%)|Umucu:1g(4%)|Ushukela:Isineg(amashumi amahlanu%)|Uvithamini A:920IU(18%)|Uvithamini C:4mg(5%)|I-calcium:Isinemg(5%)|Insimbi:0.4mg(amabili%)
Le iresiphi yekhekhe le-buttermilk ikhekhe eyenziwe ekuqaleni igcwele i-lemon curd eyenziwe ngokwabo futhi iqandiswe nge-zest lemon buttercream. Leli khekhe liyi-HUGE hit noma ngabe awuyena umthandi kalamula!
Isihloko Sokuqhuma Kukhumbula Ukuzwa UJohnny Depp Kungamudlala: Lokhu Akuzukuya Emsebenzini
Buka iTrailer yamaNetflixs Jamie Foxx Movie Project Power
UCaleb McLaughlin on Stranger Izinto 4: Mhlawumbe Abafuni Ukunikeza Noma Omunye Isikhathi Esithile
Isiqeshana Esikhethekile: Ukuletha Umculo Empilweni KuJimi: All Is by My Side
indlela yokuhlobisa ikhekhe ngesinyathelo
izikhombisi eziningi ezi-3 emdlalweni
Ingabe uFerrell noMark Wahlberg Bayesabeka Ekuthukaneni
Ingabe uFerrell noMark Wahlberg, abalingisi befilimu entsha iDaddys Home, bakulungele ngempela ukuhlakazana.
I-Crusting Cream Cheese Frosting Recipe
I-frosting ekhilimu ebushelelezi futhi e-creamy crusting ekhilimu ekhuluphele ngokwanele yokupayipi, ukugcwalisa nokuqandisa ikhekhe.
I-DAVE Star GaTa Ikhuluma Ngokuthola Ama-Props avela kuLeonardo DiCaprio, Isizini 2, neKusasa Lakhe Elibambile
UGaTa, inkanyezi yeLil Dickys FXX series DAVE, ukhuluma ngokuthola izinsiza ezivela kuLeonardo DiCaprio, yena uqobo esekhamera, nekusasa lakhe njengomlingisi.